ठेगाना पार्सि Unders, मानकीकरण, र वितरण प्रमाणिकरण एपीआईहरू बुझ्दै Martech Zone
शुक्रबार, जुन 26, 2020 सोमबार, नोभेम्बर 2, 2020 Douglas Karr
अनलाइन काम गर्नु अघि मैले एक दशकसम्म अखबार र प्रत्यक्ष मेल उद्योगहरूमा काम गरें। किनभने मेलिंग वा शारीरिक मार्केटिंग संचार वितरण एकदम महँगो थियो, हामी डाटा सफाईको बारेमा अत्यन्त सतर्क थियौं। हामी प्रति परिवार एक टुक्रा चाहान्छौं, बढी कहिले पनि। यदि हामीले एउटै ठेगानामा समान डायरेक्ट मेल टुक्राहरू वितरण गर्‍यौं भने यसले बहु मुद्दाहरूलाई निम्त्यायो।
एक निराश उपभोक्ता जो सबै मार्केटिंग संचार अप्ट-आउट हुनेछ।
थप मुद्रण लागतको साथ डाक वा वितरणको अतिरिक्त खर्च।
सामान्यतया, हामीलाई विज्ञापनदातालाई फिर्ता गर्न आवश्यक पर्दछ जब उनीहरूले डुप्लिकेट डेलिभरी ल्याए।
थप रूपमा, ठेगानाहरू जुन अपूर्ण वा गलत आवश्यक रिफन्डहरू र अनावश्यक वितरण लागत पनि थिए।
अनलाइन प्रविष्ट गरिएका ठेगानाहरूको करीव २०% ले त्रुटिहरू समावेश गर्दछ - हिज्जे गल्तीहरू, गलत घर नम्बरहरू, गलत हुलाक कोडहरू, ढाँचा त्रुटिहरू जुन एक देशको हुलाक नियमहरूको पालना गर्दैन। यो ढिलो वा अविश्वसनीय खेलाडी, घरेलू र सीमाना पार गर्ने व्यवसाय गर्न कम्पनीहरूको लागि एक ठूलो र महँगो चिन्ताको परिणाम हुन सक्छ।
ठेगाना प्रमाणिकरण यो सजिलो जस्तो सजिलो छैन, यद्यपि। हिज्जे मुद्दाहरूको बाहेक, प्रत्येक हप्ता त्यहाँ देशभित्र वितरणयोग्य ठेगानाहरूको राष्ट्रिय डेटाबेसमा नयाँ ठेगानाहरू थपिन्छन्। त्यस्ता ठेगानाहरू पनि छन् जुन रूपान्तरण भएको छ किनकि भवनहरू वाणिज्यबाट आवासीय रूपमा परिवर्तन हुन्छन्, वा एकल परिवार बहु-परिवार आवासमा, खेत जग्गा जमिनमा विभाजित हुन्छ, वा सम्पूर्ण छिमेकिको पुनर्विकास हुन्छ।
ठेगाना प्रमाणीकरण प्रक्रिया
ठेगाना पार्स गरिएको छ - त्यसैले घरको संख्या, ठेगाना, संक्षेप, गलत हिज्जे, आदि तार्किक रूपमा अलग गरियो।
ठेगाना मानकीकृत छ - एक पटक पार्स गरेपछि, ठेगाना त्यसपछि मानकमा पुन: फर्म्याट हुन्छ। यो महत्वपूर्ण छ किनकि 123 मुख्य सेन्ट र 123 मुख्य सडक तब मानकीकृत हुनेछ 123 मुख्य सेन्ट र एक नक्कल मिलान र हटाउन सकिन्छ।
ठेगाना मान्य छ - मानक गरिएको ठेगाना एक राष्ट्रिय डेटाबेसको बिरूद्ध मेल खाएको छ कि यो वास्तवमै अवस्थित छ भनेर हेर्नको लागि।
ठेगाना प्रमाणित भयो - सबै ठेगानाहरू ती अवस्थित भए पनि वितरण योग्य छैनन्। यो एक मुद्दा हो जुन गुगल नक्सा जस्ता सेवाहरूसँग छन्… तीनिहरूले तपाईंलाई मान्य ठेगाना प्रदान गर्दछन तर त्यहाँ संरचना पनि हुन सक्नुहुन्न।
ठेगाना प्रमाणीकरण भनेको के हो?
ठेगाना प्रमाणीकरण (ठेगाना प्रमाणिकरण पनि भनिन्छ) एक प्रक्रिया हो जुन सडक र हुलाक ठेगानाहरू अवस्थित गर्दछ। एक ठेगाना दुई मध्ये एउटामा प्रमाणित गर्न सकिन्छ: अगाडि
ठेगाना प्रमाणीकरण भनेको के हो? फाइदाहरू र प्रयोगका केसहरू वर्णन गरियो
ठेगाना प्रमाणीकरण बनाम ठेगाना प्रमाणीकरण (ISO9001 परिभाषा)
सबै ठेगानाहरू सेवाहरू एकै हुँदैनन्, यद्यपि। धेरै ठेगाना प्रमाणिकरण सेवाहरूले डाटाबेससँग मेल खाने नियमहरूको उपयोग गर्दछ। अर्को शब्दहरुमा, सेवाले भन्न सक्छ कि zip 98765 XNUMX within within भित्र कि त्यहाँ छ मुख्य स्ट्रीट र यो ठेगाना १ मा सुरू हुन्छ र १ 1० मा समाप्त हुन्छ। परिणाम स्वरूप, १२150 मेन सेन्ट ए हो वैध घर तर्क मा आधारित, तर आवश्यक एक छैन प्रमाणित ठेगाना जहाँ केहि डेलिभर हुन सक्छ।
यो सेवाहरूको साथ पनि एक मुद्दा हो जुन निर्दिष्ट ठेगानाको साथ अक्षांश र देशान्तर प्रदान गर्दछ। यि धेरै प्रणालीहरू गणितको प्रयोग गरी तार्किक रूपमा ब्लकमा ठेगानाहरू छुट्ट्याउन र गणना अक्षांश र देशान्तर फिर्ता गर्न। खुद्रा विक्रेताहरू, रेस्टुरेन्टहरू, र वितरण सेवाहरूले शारीरिक डेलिभरीको लागि लेट / लामो प्रयोग गर्दछन्, जुन एक टनको समस्या निम्त्याउन सक्छ। एक ड्राइभर ब्लकको आधा बाटो तल हुन सक्छ र अनुमानित डाटामा आधारित तपाईंलाई फेला पार्न असमर्थ।
ठेगाना डाटा क्याप्चर गर्दै
म अहिले एक वितरण सेवा संग काम गर्दै छु जहाँ उपभोक्ताहरूले आफ्नो ठेगाना जानकारी प्रविष्ट गर्छन्, कम्पनीले दैनिक रुपमा डेलिभरी निर्यात गर्दछ, र त्यसपछि तिनीहरूलाई फरक सेवाको उपयोग गरी रुट गर्दछ। प्रत्येक दिन, दर्जनौं अविश्वसनीय ठेगानाहरू छन् जुन प्रणाली भित्र सुधार गर्नुपर्दछ। यो प्रदान गरिएको समयको बर्बादी हो जुन प्रणालीहरू यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्दछन्।
जब हामी प्रणालीलाई अप्टिमाइज गर्दैछौं, हामी प्रविष्टि भएको बेलामा प्रमाणित र प्रमाणित गर्न काम गरिरहेका छौं। तपाईको डेटा सफाई सुनिश्चित गर्नका लागि यो उत्तम तरिका हो। प्रविष्टिमा उपभोक्तालाई मानकीकृत, प्रमाणित डेलिभरी ठेगाना प्रस्तुत गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई सहि गर्नुहोस् कि यो सहि छ।
त्यहाँ केही मानकहरू छन् जुन तपाईं हेर्न चाहानुहुन्छ कि प्लेटफर्मले प्रयोग गर्दछ:
CASS प्रमाणन (संयुक्त राज्य अमेरिका) - कोडिंग सटीकता समर्थन प्रणाली (CASS) ले संयुक्त राज्य अमेरिका हुलाक सेवा (USPS) लाई सफ्टवेयरको सटीकता मूल्याables्कन गर्न सक्षम गर्दछ जुन सडक ठेगानाहरूलाई सच्याउँछ र मेल खान्छ। CASS प्रमाणीकरण सबै मेलरहरू, सेवा ब्यूरो, र सफ्टवेयर विक्रेताहरूलाई प्रस्ताव गरिन्छ कि USPS उनीहरूको ठेगाना मिल्दो सफ्टवेयरको गुणस्तर मूल्यांकन गर्न र तिनीहरूको ZIP +,, क्यारियर मार्ग, र पाँच-अंकको कोडिंगको शुद्धता सुधार गर्न चाहन्छ।
SERP प्रमाणीकरण (क्यानडा) - सफ्टवेयर मूल्यांकन र मान्यता कार्यक्रम क्यानाडा पोष्ट द्वारा जारी गरिएको हुलाक प्रमाणिकरण हो। यसको उद्देश्य केहि मेलिंग ठेगानाहरू प्रमाणित गर्न र सफ्टवेयरको क्षमताको मूल्यांकन गर्नु हो।
ठेगाना प्रमाणिकरण एपीआई
मैले माथि भनें, सबै ठेगाना प्रमाणिकरण सेवाहरू समान बनाइएको छैन - त्यसैले तपाईं वास्तवमै उठ्न सक्ने कुनै पनि मामिलाहरूमा नजर राख्नुहुनेछ। नि: शुल्क वा सस्तो सेवामा केही पैसाहरू बचत गर्नाले तपाईंलाई डाउनस्ट्रीम डेलिभरी मुद्दाहरूमा डलर निम्त्याउँछ।
मेलिसा हाल प्रस्ताव गर्दै छ नि: शुल्क ठेगाना प्रमाणीकरण सेवाहरू छ महिनाको लागि (प्रति महिना १०० रेकर्डहरू सम्म) COVID-१ p महामारीको समयमा समुदायहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने आवश्यक संगठनहरूलाई योग्य बनाउने।
यहाँ ठेगाना प्रमाणिकरणको लागि अधिक लोकप्रिय एपीआईहरू छन्। तपाईंले देख्नुहुनेछ कि एउटा लोकप्रिय प्लेटफर्म उल्लेख गरिएको छैन - गुगल नक्शा एपीआई। त्यो किनभने यो ठेगाना प्रमाणिकरण सेवा होईन, यो हो जियो कोडिंग सेवा जबकि यसले मापन गर्दछ र अक्षांश र देशान्तर फिर्ता गर्दछ, यसको मतलब यो होइन कि प्रतिक्रिया डेलिभर हुन्छ, शारीरिक ठेगाना हो।
ईप्सिपोस्ट - अमेरिका ठेगाना प्रमाणिकरण र छिटो बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय ठेगाना प्रमाणिकरण।
Experian - ठेगाना प्रमाणीकरण २ 240० भन्दा बढी देशहरू र विश्वभरि क्षेत्रहरूको लागि।
प्रशंसा - संसारभरि २ 240० भन्दा बढी देशहरूका डाटामार्फत, लोबले दुबै घरेलू र अन्तर्राष्ट्रिय ठेगानाहरू प्रमाणित गर्दछ।
लग - इन - ठेगाना प्रमाणीकरण समाधान कि क्याप्चर, पार्स, मानकीकृत, प्रमाणित, सफा, र ढाँचा ठेगाना डाटा २ countries245 भन्दा बढी देश र क्षेत्रहरूको लागि।
melissa - २240०+ देशहरू र क्षेत्रहरूको लागि प्रविष्टिको बिन्दुमा र ब्याचमा ठेगानाहरू प्रमाणित गर्दछ केवल वैध बिलि and र शिपिंग ठेगानाहरू क्याप्चर गरिएको छ र तपाईंको प्रणालीहरूमा प्रयोग गरिएको छ भनेर सुनिश्चित गर्न।
स्मार्टसफ्ट डीक्यू - स्ट्यान्डअलोन उत्पादनहरू, ठेगाना मान्यीकरण एपीआईहरू र टूलकिटहरू प्रदान गर्दछ जुन सजिलैसँग तपाईंको अवस्थित ठेगाना-निर्भर अनुप्रयोगहरूमा एकीकृत गर्दछ।
SmartySt Street - एक अमेरिकी सडक ठेगाना एपीआई छ, जिप कोड एपीआई, स्वत: पूरा API, र अन्य उपकरणहरू तपाईंको अनुप्रयोगहरूमा समाहित गर्न।
टमटम - टमटम अनलाइन खोजीको जियो कोडि request अनुरोध सुविधाले ठेगाना डाटा सफा गर्न र जियोकोड स्थानहरूको डाटाबेस बनाउनको लागि सजीलो समाधान प्रदान गर्दछ।
टैग: ठेगाना एपीआईठेगाना डाटाठेगाना geocodingठेगाना पार्सिठेगाना मानकीकरणठेगाना प्रमाणीकरणठेगाना प्रमाणिकरणईसीपास्टiso9001लोबloqateमेलिसा डाटाsmartsoft dqटमाटोम